Dagaalka Gaalkacyo Ma Mashruuc baa ? | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Dagaalka Gaalkacyo Ma Mashruuc baa ?
Madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Gaas oo safar uga maqan Puntland ayaa waxaa la sheegayaa in Dowladaha Ethiopia iyo Imaaraadka uu ka dalbaday inay garab ku siiyaan tayeynta ciidamada Maamulka ee ka howlgala furumaha dagaalka.
C/wali Gaas, ayaa la sheegay in Dowlada Ethiopia uu ka dalbaday Hub iyo Saanad Milliteri oo la sheegay inuu isaga difaacaayo maamulka Galmudug.
Gaas ayaa codsigaani ku aadan Hubeynta ciidamada Puntland kuwa ka dagaalamaaya furumaha si wada jira u weydiistay Ra’isul wasaaraha iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Ethiopia.
C/wali Gaas ayaa labadaasi Mas’uul u sheegay in Puntland ay dagaal kula jirto Maleeshiyaadka Al­shabaab oo garab ka helaayo Galmudug.
Gaas waxa uu Ethiopia ka dalbaday in laga caawiyo dagaalka, waxa uuna sidoo kale xusay in Al­shabaab ay halis ku tahay dhammaan deegaanada hoostaga Puntland.
Qaraxyada iyo Dilalka ka dhaca Puntland ayuu Ethiopia u sheegay inay fuliyaan Alshabaab oo garab ka helaaya Galmudug.
Sidoo kale, C/wali Gaas waxa uu dhaqaale uu ku qalabeeyo ciidamada maamulka weydiistay Dowlada Imaaraadka carabta, waxa uuna sharaxaad kooban ka siiyay micnaha uu ku fadhiyo dagaalka ka socda magaalada Gaalkacyo.
Gaas waxa uu Dowlada Imaaraadka sidoo kale, u sheegay in dagaalka ka socda Gaalkacyo uu yahay mid ay kula jiraan Al­shabaab, sidaa darteedna ay uga baahan yihiin garab.
Dalabka C/wali Gaas ee horyaal Dowladaha Ethiopia iyo Imaaraadka ayaa u muuqanaaya mid mashruuc looga dhigaayo dagaalka lagu leynaayo dadka shacabka ah.
Maamulka Puntland ayaa horay u sheegay in dagaalka ka socda magaalada Gaalkacyo uu yahay mid ay kusoo qaaden Al­shabaab iyo Galmudug oo is garabsanaaya.
One thought on “Dagaalka Gaalkacyo Ma Mashruuc baa ?”
Qofkasta oo wax garad ah waxuu ka warqaba in gal nus mudug iyo argagixisadu isku moqif yihin, masulinta puntland horay ayey ushegen wax laqarinayo ma’ah in Alad milatari loradsado wax ceeb ah ma’ah,dawladaha cabdiwali boqanayo waligi wa boqan jiray boqashadan waxay laxirirta,saxibtinimada puntland iyo Imaradka carabta iyo xukumada Itoobiya cilaqadka wanagsan ee ka dhexeya oo lasii xojinayo.